Amagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19: izindlela
Amagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19: izindlela zokuwathola, ukuwavimba, ukusabela kuwo nokuwalawula
Ama-Coronavirus awumndeni omkhulu wamagciwane aziwayo ukuthi abangela izifo ezihlukahlukene ezihlanganisa umkhuhlane ovamile kanye nezifo ezibucayi kakhulu ezifana ne-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kanye ne-Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
I-coronavirus entsha (I-COVID-19) yatholwa ngo-2019 e-Wuhan, e-China. Lena kwakuyi-coronavirus entsha eyayingakaze ibonwe ngaphambilini kubantu.
Lesi sifundo sikunikeza isingeniso esivamile ngokuqondene ne-COVID-19 kanye namagciwane okuphefumula asafufusa futhi sihloselwe izisebenzi zempilo yomphakathi, abaphathi bezehlakalo kanye nabasebenzi abasebenzela Izizwe Ezihlangene, izinhlangano zamazwe omhlaba nama-NGO.
Njengoba igama elisemthethweni lesifo lasungulwa ngemva kokwakhiwa kwezinto zokufundisa, noma nini lapho kukhulunywa nge-nCoV sisuke sibhekisele ku-COVID-19, isifo esithathelanayo esibangelwa i-coronavirus esanda kutholwa
Le khosi iyatholakala nangezilimi ezilandelayo:
English - Français - Español - 中文 - Português - العربية - русский - Türkçe - српски језик - فارسی - हिन्दी, हिंदी - македонски јазик - Tiếng Việt - Indian sign language - magyar - Bahasa Indonesia - বাংলা - اردو - Kiswahili - አማርኛ - ଓଡିଆ - Hausa - Tetun - Deutsch - Yorùbá- ਪੰਜਾਬੀ - Asụsụ Igbo - Soomaaliga - Afraan Oromoo - دری - Kurdî - پښتو - मराठी- Fulfulde- සිංහල - Latviešu valoda - తెలుగు - Esperanto - ภาษาไทย - chiShona - Kreyòl ayisyen -Казақ тілі
Ukubuka Konke: Lesi sifundo sinikeza isingeniso esivamile ngokuphathelene namagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya ama-coronavirus amasha. Ekupheleni kwalesi sifundo, kufanele ukwazi ukuchaza:
Uhlobo lwamagciwane okuphefumula amasha, indlela yokuthola futhi uhlole ukubheduka, amasu okuvimba nokulawula ukubheduka okubangelwa amagciwane okuphefumula amasha;
Yimaphi amasu okufanele asetshenziswe ukuze kuxoxiswane ngobungozi futhi kusetshenziswane nemiphakathi ukuze kutholwe, kuvinjwe futhi kusatshelwe ekuveleni kwegciwane lokuphefumula elisha.
Kukhona izinsiza ezinanyathiselwe kumojuli ngayinye ukuze usizwe ungene ujule kulesi sihloko.
Umgomo wokufunda: Ukuchaza izimiso ezibalulekile zamagciwane okuphefumula amasha kanye nendlela yokusabela ngokuphumelelayo ekubhedukeni.
Ubude besikhathi sesifundo: Cishe amahora angu-3.
Izitifiketi: Isitifiketi Serekhodi Lokufinyelelwe sizotholakala kubabambiqhaza abathola umphumela okungenani ongu-80% wengqikithi yamaphoyinti atholakala kuwo wonke amakhwizi.
Ihunyushwe ukuze ibe isiZulu yivolontiya lokuthi Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response and control, 2020. I-WHO ayinaso isibopho ngokuqondene nokuqukethwe noma ukunemba kwalokhu kuhumusha. Esimweni lapho kunanoma yikuphi ukungavumelani phakathi kwesiNgisi kanye nokuhumusha kwesiZulu, inguqulo yokuqala yesiNgisi izoba inguqulo ebophezelayo nesemthethweni.
Lokhu kuhumusha akuqinisekisiwe yi-WHO. Le nsiza ihloselwe injongo yokusekela ukufunda kuphela.
Amagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19: Isingeniso:
Lesi singeniso esifushane sinikeza ukubuka konke kwamagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19.
Imojuli 1: Isingeniso sokuthi Amagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Ukwazi ukuchaza ukuthi kungani igciwane lokuphefumula elisha, okubandakanya i-COVID-19 liwusongo lwembulunga yonke ezimpilweni zabantu.
Imojuli 2: Ukuthola Amagciwane okuphefumula amasha, okubandakanya i-COVID-19: Ukuqapha kanye nocwaningo Lwaselabhorethri:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Ukuchaza indlela yokuthola nokuhlola ukubheduka kwegciwane lokuphefumula elisha
Imojuli 3: Ucwaningo Lwaselabhorethri:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Izinhlobo zamasampula ezidingekayo, Uhlobo locwaningo lwaselabhorethri olusetshenziselwa ukuqinisekisa izimo.
Imojuli 4: Ukuxoxa Ngobungozi kanye Nokusebenzisana Nomphakathi:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Ukuchaza ukuthi yimaphi amasu okufanele asetshenziswe ukuze kuxoxwe ngobungozi futhi kusetshenziswane nemiphakathi ukuze kutholwe, kuvinjwe futhi kusatshelwe ku-COVID-19.
Imojuli 5: Ukusebenzisana Nomphakathi:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Ukuchaza okungenani izizathu ezintathu zokuthi kungani izisebenzi zezempilo zidinga ukusebenzisana nemiphakathi phakathi nokubheduka, Ukusho izinselele okubhekenwe nazo ekusebenzisaneni nomphakathi (I-CE) futhi, Kuchazwe izindlela ukuze kube ne-CE ephumelelayo ekutholeni, ukuvimba nokusabela kubhubhane.
Imojuli 6: Ukuvimbela Nokusabela egciwaneni lokuphefumula elisha, okubandakanya i-COVID-19:
Ingqikithi yomgomo wokufunda: Ukuchaza amasu okuvimbela nokulawula izifo zokuphefumula ezifufusayo, okubandakanya ukubheduka kwe-coronavirus.